Tout sur le checkout d'Instagram - Winches क्लब
इन्स्टाग्राम चेकआउट को बारे मा सबै
इन्स्टाग्राम चेकआउट अब अमेरिका मा सबै योग्य व्यवसायहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ र निकट भविष्य मा ग्लोबल जानेछ.
चेकआउट सुविधा हामीलाई हाम्रो इन्स्टा अनुप्रयोग बाट सीधा उत्पादनहरु खरीद गर्न अनुमति दिन्छ. अब देखी, हामी हाम्रो आदेश सिधै इन्स्टा मा राख्न सक्छौं जब हामी हाम्रो मनपर्ने उत्पादन ट्याग संग shoppable पोस्ट अन्वेषण.
इन्स्टाग्राम अनुसार, 130 millions d’utilisateurs cliquent chaque mois sur des posts shoppable, र यो आश्चर्य को कुरा छैन कि इन्स्टाग्राम अब समारोह राखिएको छ ” चेकआउट ” संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै व्यवसायहरु को लागी उपलब्ध छ.
को लोकप्रियता मा वृद्धि “पसल योग्य पोस्टहरु” छिटो एक ई-वाणिज्य प्लेटफर्म मा Insta रूपान्तरण. चेकआउट सुविधा अब यो परिवर्तन को पूरक र राम्रो को लागी प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार हुनेछ.
अब हामी एक उत्पादन ट्याग हामीलाई मनपर्छ र त्यो उत्पादन को लागी इन्स्टाग्राम मा सीधै तिर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो खरीद प्रक्रिया कुनै अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म मा कहिल्यै सजिलो भएको छ.
उनीहरुले हामीले पसल गर्ने तरिका र कम्पनीहरु लाई आफ्नो इन्स्टा स्टोर को उपयोग गर्ने तरीका परिवर्तन गरीएको छ।.
व्यापार मालिकहरु को लागी, क्षमता छिटो मात्र ब्राउजिंग बाट उत्पादनहरु खरिद गर्न को लागी इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग नतिजा बिक्री दर मा नतिजा बिना ब्राउजिंग बाट रूपान्तरण गर्ने.
व्यवसायहरु, को प्रभाव पार्नेहरु र प्रयोगकर्ताहरु भुक्तानी कार्यक्षमता संग रोमाञ्चक समय अनुभव हुनेछ.
तपाइँ इन्स्टाग्राम चेकआउट को उपयोग गर्नु पर्छ?
हामी मध्ये धेरै धेरै बर्षहरु को लागी मार्केटि and र विज्ञापन को लागी इन्स्टा प्लेटफर्म को उपयोग गरी रहेको छ।, र हामी यो हाम्रो मार्केटि strategies रणनीतिहरु को लागी भएको महत्व को बारे मा सजग छौं.
तर पछिल्लो बर्ष को भर्खरको परिवर्तनहरु लाई राम्रो संग को लागी यो प्लेटफर्म को नयाँ आकार दिइन्छ।. यो अब उप्रान्त मात्र एक विज्ञापन प्लेटफर्म हुनु पर्छ.
इन्स्टाग्राम चेकआउट सुविधा एक सजिलो मंच संग हाम्रो ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्दछ, जसबाट उनीहरु हाम्रा उत्पादनहरु किन्न सक्छन्.
यो वर्ष, इन्स्टाग्रामले महामारीको माध्यम बाट यथाशक्य ब्यापार र ब्रान्डहरु लाई समायोजित गर्ने कोशिश गरेको छ.
उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा स्टोर कार्यक्षमतालाई सामान्यीकरण गरे र QR कोड रोल आउट गरी हामीलाई इन्स्टामा हाम्रो व्यापार बढाउन मद्दत गरे.
इन्स्टाग्राम रिपोर्ट que 80 % des comptes suivent un compte d’entreprise, जो स्पष्ट रूप मा बताउँछ कि उनीहरु कडा मेहनत गरे सुनिश्चित गर्न को लागी कि हामी हाम्रो प्लेटफर्म को सबै भन्दा बाहिर प्राप्त गर्न सक्छौं.
यहाँ छ कि कसरी प्रयोगकर्ताहरु केहि सरल चरणहरुमा हाम्रा उत्पादनहरु किन्न सक्छन्:
The खरिद आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्
Displayed प्रदर्शित उत्पादन मा क्लिक गर्नुहोस्
Cash नगद रजिस्टर मा ट्याप गर्नुहोस्
Card कार्ड विवरण र बिलि information जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्
Place ठाउँ आदेश मा क्लिक गर्नुहोस्
कसरी इन्स्टाग्राम चेकआउट को लागी आवेदन गर्ने?
तपाइँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा इन्स्टाग्राम चेकआउट को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ पहिले तपाइँको स्टोर कन्फिगर गर्नु पर्छ.
तपाइँको खाता तेसैले तपाइँको फेसबुक पेज वा Shopify मा जोडिएको छ, जहाँ Insta तपाइँको सूची र उत्पादन जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
इन्स्टा तपाइँको उत्पादन लेबल बनाउन को लागी तपाइँको जानकारी को उपयोग गर्दछ ताकि तपाइँ तपाइँको फोटो मा तपाइँको उत्पादनहरु लाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो र IGTV अब.
सफलतापूर्वक तपाइँको पसल को स्थापना पछि, तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ यो फारम यहाँ चेकआउट अनुरोध गर्न.
यदि तपाइँ संयुक्त राज्य मा हुनुहुन्न, तयार हुनुहोस् र तपाइँको स्टोर बनाउनुहोस्. एक टाउको भुक्तानी कार्यक्षमता को रूप मा चाँडै यो विश्वव्यापी तैनात गरीएको छ को उपयोग गर्न को लागी प्राप्त गर्नुहोस्.
कसरी तपाइँको नगद रजिस्टर बाट धेरै प्राप्त गर्न को लागी
हामी तपाइँलाई तपाइँको इन्स्टाग्राम चेकआउट सुविधा को सबैभन्दा बाहिर प्राप्त गर्न को लागी केहि सुझाव छ।, र यस तरिका, तपाइँ पनी तपाइँको बिक्री बढाउन सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ.
1. सबै सामग्री ढाँचाहरु मा तपाइँको उत्पादनहरु ट्याग विचार गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको बिक्री अधिकतम गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको लेबल लाई सीमित नगर्नुहोस्. सधैं प्रत्येक सामग्री ढाँचामा तपाइँको उत्पादनहरु ट्याग गर्न सम्झनुहोस्. फोटो र भिडियो को सबै भन्दा बाहिर पाउनुहोस्.
विभिन्न सामग्री ढाँचामा ट्याग विकास गरेर, तपाइँ पक्का गर्नुहुन्छ कि तपाइँ सम्भव भएसम्म धेरै व्यक्तिहरु सम्म पुग्नुहुन्छ जो तपाइँको सामग्री हेर्छन्.
अधिक तपाइँको उत्पादनहरु देखिने छन्, सजिलो यो तपाइँको दर्शकहरु को लागी नोटिस गर्न को लागी हो र चेकआउट सुविधा को माध्यम बाट तपाइँ बाट किन्नुहोस्.
2. प्रभावशाली संग साझेदारी
प्रभावशाली व्यक्तिहरु धेरै छन्, र उनीहरु नजिकबाट आफ्ना अनुयायीहरु द्वारा प्रशंसा गरिन्छ. हामीले उनीहरुलाई क्रेडिट दिनु पर्छ किनकि उनीहरु के गर्छन् मा महान छन्.
उनीहरु मध्ये धेरै लगातार संलग्न र आफ्नो वफादार अनुयायीहरु को लागी मूल सामग्री उत्पादन गरेर आफ्नो व्यक्तिगत प्लेटफार्महरु को विकास मा सफल भएको छ।. यसरी उनीहरु जीविकोपार्जन गर्छन्, त्यसैले उनीहरुलाई एक वा दुई कुरा थाहा हुनुपर्छ.
प्रभावितहरु र निर्माता खाता धारकहरु संग साझेदारी गरेर जो पनी सीधा आफ्नो सामग्री मा उत्पादनहरु ट्याग गर्न सक्छन्, तपाइँ आफ्नो उत्पादनहरु लाई उनीहरुको प्लेटफर्म मा अधिक आक्रामक विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ, तर एक प्रामाणिक तरीका मा.
न केवल तपाइँको उत्पादनहरु लाई उनीहरुका अनुयायीहरु द्वारा धेरै छिटो देखीनेछ, तर यो आफैंमा विज्ञापन गर्न को लागी एक स्मार्ट तरीका हो, तपाइँको उत्पादनहरु सीधै बेच्न को लागी प्रयास नगरीकन.
3. Carousels प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँको उत्पादनहरु को लागी carousels को उपयोग गरेर तपाइँको दर्शकहरु लाई छिटो पुग्न सक्छ, तर प्रभावकारी. अधिक नेत्रहीन तपाइँको उत्पादनहरु को छविहरु मनपर्ने, सजिलो यो तपाइँको दर्शकहरुको ध्यान कब्जा गर्न को लागी हुनेछ.
रचनात्मक बन्नुहोस् र तपाइँको केहि उत्पादनहरु संग छविहरु बनाउनुहोस्. यसरी, तपाइँ मात्र एक सामग्री मा केहि उत्पादनहरु ट्याग गर्न सक्नुहुन्न, तर पनी एक साथ र अधिक छिटो यी उत्पादनहरु लाई इंगित गर्न को लागी.
स्टोर र भुक्तानी प्रकार्यहरु छिटो भन्दा पहिले भन्दा ठूलो मंच मा इन्स्टा रूपान्तरण. ट्यून रहन र जारी गरीएको छ कि सबै अवस्थित र नयाँ सुविधाहरु संग आफैलाई परिचित गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस्।.
इन्स्टाग्राम टीम तपाइँको आवश्यकताहरु र अपेक्षाहरु लाई पूरा गर्न को लागी पछिल्लो केहि बर्षहरुमा धेरै मेहनत गरीएको छ, त्यसोभए सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सबै सुविधाहरु को यो प्रस्ताव गरीएको छ को पूरा लाभ लिनुहोस्.
IGTV किनमेल अब इन्स्टाग्राम मा उपलब्ध छ
कसरी टिकटक दृश्य प्राप्त गर्ने – एक जानकारीमूलक गाइड
अघिल्लो लेखIGTV किनमेल अब इन्स्टाग्राम मा उपलब्ध छ
अर्को लेखइन्स्टाग्राम जस्तै ऑटो: स्वचालित मनपर्ने को लागी बोट